December 5, 2008, 2:54 am
ညီမလေးရေ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်..ဘယ်လောက်ခံပြင်းဒေါသထွက်စရာကောင်းလဲဆိုတာ…ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကကောင်းပေမယ့် ကိုယ့်ကိုပြန်မကောင်းတဲ့ အပြင် ယုတ်မာသွားကြတဲ့သူတွေကို မေတာသာထားလိုက်ပါ..ကိုယ်ကောင်းတဲ့ ကုသိုလ်ကိုခံရမှာပါ..သူမကောင်းတဲ့ အကုသိုလ်သူခံရလိမ့်မယ် ညီမ…( ဒါပေမဲ့ သူ့photo ကြီးပါတင်ထားတာတော့ မကောင်းဘူးလို့ မြင်မိတယ်..သူ့အကုသိုလ်မှာ ကိုယ်ပါဝင်ရောမပါမိစေနဲ့ ညီမ)
Comment by Anonymous December 5, 2008 @ 3:56 am
ကိစ္စက ပူပူနွေးနွေးဖြစ်နေတာမို့ ဒေါသက မပြေသေးဘူးထင်ပါတယ်။ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ သူ့နာမည်နောက်မှာ သူ့လင့်ခ်ပါ ချိတ်လိုက်မိတယ်။ မကောင်းဘူးဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်မိရင်း လင့်ခ်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။ စိတ်သိပ်မပြေသေးလို့ထင်ပါတယ်။ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် 🙂
Comment by လင်းလက်ကြယ်စင် December 5, 2008 @ 4:08 am
ကောင်းတဲ့ပိုစ့်ပါ။ စာရေးသူနဲ့ထပ်တူ ခံစားမိပါတယ်။
Comment by boy December 5, 2008 @ 4:13 am
Comment by boy December 5, 2008 @ 4:20 am
Thein Nyo (Silk Weaving)
Ohn Daw Quarter, Amarapura, Mandalay
Tel: 02-70059, 02-70452
Silk and Cotton weaving product
Shwe Sin Tine' Family Silk House
Maung Dun Yat, Mahagandaryon Rd, Amarapura, Mandalay
Tel: 02-70030, 02-70767
Shwe Kant Kaw Silk House
No. 70, 78th St, (Between 34th & 35th St),
South of Yadanarbon Market, Mandalay
Tel: 02-89560, 09-2007584
ညီမလေး ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ခွဲတွေရှိလိမ့်မယ်…ပီးရင် latest design နဲ့ ညီမကြိုက်တယ့်အေ၇ာင်ပြောပီးမှာလိုက်လေ.. ဒေါ်သန်းနုတို့ဆိုင်ကနေပို့ခိုင်းလိုက် ပီး၇င် penisualar ကဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ် ချုပ်လိုက်ပေါ့..or ကိုယ်တိုင်းသိ၇င် ရန်ကုန်မှာ ၂ရက်ဆိုရတာပဲ..တသက်တခါ မင်္ဂလာဆောင်ရတာ..ကိုယ်လုပ်ချင်တာ သူများကြောင့် အပျက်မခံနဲ့ညီမလေး… အကူညီလိုရင် mail ပို့လိုက်နော်…Moderation လုပ်ပီး comment ပေါ်မတင်ပါနဲ့နော်..င်္ဟီးး
Comment by may December 5, 2008 @ 6:18 am
တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ မရှာပဲရတတ်သလို တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်
Comment by MANORHARY December 5, 2008 @ 9:54 am
စိတ်အနှောင့်အယှက် ကင်းကင်းနဲ့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ညီမလေးရေ 🙂
Comment by GreenGirl December 5, 2008 @ 11:42 am
I head that Ko Naing Moe Aung and his wife divorced because of you. I want to know it is true or not?
Comment by Anonymous December 5, 2008 @ 12:04 pm
Dear Anonymous, Thanks for your direct question. I have already heard people keep gossip about that. You can ask anyone who knows about him truly. You can read my old posts again that I only meet him just2years ago.
My fiance and his ex-wife already divorced legally before I meet him asafriend two and half years ago. I want to say that people are just gossip and never find out the truth. Things are already cleared even before we know one another. It’s ok. I am not conservative person and won’t reject any reality.
Comment by လင်းလက်ကြယ်စင် December 5, 2008 @ 12:13 pm
ဒီလိုပါပဲ ညီမလေးရေ ။ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ငွေကြေးဆုံးရှုံးတာထက် ကိုယ် ထားခဲ့ဖူးတဲ့ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေး မဆုံးရှုံးစေချင်ဘူး ။ ခုလို ပျော်ရွှင်ရမဲ့ အချိန်လေးတွေမှာ ကျန်တာတွေ မေ့ထားလိုက်ပေါ့ ။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲလေးအကြောင်းကို ဖတ်ရှု ဝမ်းမြောက်ဖို့ မျှော်နေမယ်ဗျာ။
ဒါနဲ့ ခုလို ပွဲရက်နားနီးရင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေ ကြုံတတ်တာ သဘာဝပဲ ညီမလေးရဲ့ ။ အဓိက ကတော့ ၂ ယောက်စလုံး ကျန်းမာရေးတော့ ဂရုစိုက်ကွ ။ အိပ်ရေးတောင် အပျက်မခံကြနဲ့ ။ ဒါမှ ပွဲနေ့မှာ လန်းမှာပေါ့ နော့။
Comment by Anonymous December 5, 2008 @ 12:24 pm
Thank you very much to explain me. Frankly speaking, I don’t want to visit Ur blog after I heard about it and now I know the story. Sorry for asking personal question and thanks again , now I know the truth:-)
Comment by Anonymous December 5, 2008 @ 12:46 pm
မေးတာကို အပြစ်မမြင်ပါဘူး ကိုအမည်မသိရေ။ အင်မတန်မှ ဂုဏ်သိက္ခာကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ကျွန်မဘ၀မှာ ဘယ်အရာကိုမှ သိက္ခာနဲ့ လဲမှာမဟုတ်သလို ကျွန်မ လေးစားယုံကြည်မြတ်နိုးရတဲ့ ချစ်သူရဲ့ သိက္ခာကို ထိတာလည်း ကျွန်မ လက်မခံပါဘူး။ တကယ်တော့ အဖြစ်မှန်ကို မသိဘဲ မလိုတမာစိတ်နဲ့ ပြောနေသူများကြောင့် ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရခြင်းပါ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ ကျွန်မဟာ စိတ်ညစ်စွာ ၊ ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ ဖုံးလျိုထားမယ့်သူလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တရားဆိုတာ ကျွန်မ မပြောလည်း ရှိနေတာပဲလေ။ ကျွန်မ စင်္ကာပူဆိုသော ကျွန်းပေါ်ကို မရောက်ခင်ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့သော အတိတ်သမိုင်းတွေကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းများစွာနဲ့ ကျွန်မချစ်သူကို ကျွန်မ လက်ခံချစ်ခဲ့တာမို့ ဒါတွေဟာ ကျွန်မ ဘ၀သမိုင်းထဲမှာ ပြောပြဖို့ မလိုအပ်သော အရာတွေပါ။ အတိတ်သမိုင်းတွေ မှုန်ဝါးပျောက်ကွယ်ချိန်လောက်မှ အလင်းတန်းတစ်ခု အနှိုင်းမဲ့ဖြစ်ထွန်းလာတာမို့ ခိုင်မြဲသော အမှန်တရားအောက်မှာ လူတွေရဲ့ မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲချက်တွေကို လျစ်လျူရှုထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂
Comment by လင်းလက်ကြယ်စင် December 5, 2008 @ 1:05 pm
Comment by Ko Paw December 5, 2008 @ 1:13 pm
အစ်မလင်းလက်ရေ…. ခင်မင်မှုနှင့်လိမ်လည်ခံရခြင်း ပို့စ်လေးကို သေသေချာချာ ဖတ်သွားပါတယ်…စိတ်ထဲလည်းမကောင်းပါဘူး…
ဘာပဲပြောပြော အစ်မရယ် အဲလိုလူလိမ်ခံရတာ အရှေ့ ဘ၀ကို သူ့ကို ပေးဆပ်စရာရှိလို့ ဒီဘ၀မှာ ပေးဆပ်လိုက်တယ်လို့ ပဲ သတ်မှတ်ယူလိုက်ပါ။
“လူအချင်းချင်းလှည့်ပတ်ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေ”လို့ မက်မက်လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ 🙂
အစ်မရဲ့မဂ်လာ ပွဲအတွက် ကွန်ကရပ်ကျူလေးရှင်းပါ နော်.. 🙂
အစ်မ နော်.. မဂ်လာ လက်ဖွဲ့ အကြီးကြီးပို့လိုက်မယ်… ဟိဟိ…
လောလောဆယ် မင်္ဂလာ လက်ဖွဲ့အတွက် အာဝါးးးးးးးးးး အမြှောက်တသိန်း
Comment by Dream December 5, 2008 @ 1:31 pm
တီတီလင်းလက်… .. ထာဝရ ပျော်ရွှင်ဖွယ် အိမ်ထောင်ရေးလေး ပိုင်ဆိုင်ပါစေနော်… 🙂 🙂
စီဘောက်မှာ ရေးလို့မရလို့ ဒီမှာပဲ ရေးခဲ့တယ်.. လော့အင်လုပ်တာ pw
က မှားနေတယ်တဲ့… ပါ့ဝပ်ကလည်းမေ့နေတယ်.. နာမည်အသစ်
ကလည်းဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့.. ဟင့်.. ဒါကြောင့် ဒီကနေပဲ.. ပြောခဲ့လိုက်တယ်နော်…
သာယာလှပအေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘ၀လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့
ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အစ်မရေ… နော်… 🙂
Comment by Dream December 5, 2008 @ 1:41 pm
ကိုပေါရေ >> အမှန်တရားအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Dream >> နောက်တပတ်မှ အသက်(၂၀)ပြည့်မှာပါကွယ်။ တီတီရာထူးတောင် ရသွားပြီလား 😀 ။ ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ C-Box အကောင့်သစ် ဖွင့်ချင်ရင် username & password ကို အီးမေးလ်နဲ့ ပို့လိုက်လေနော်။ အလုပ်မအားသေးလို့ စီဗောက်စ်ကို လုံးဝ မဖွင့်ပေးသေးတာပါ။ မဟုတ်ရင် မမြင်ဝံ့တာတွေကို မဖျက်နိုင်သေးလို့လေ။ မင်္ဂလာ လက်ဖွဲ့ဆိုရင်တော့ စိတ်ဝင်စားတယ်လေနော် 😛 ။ လက်ဖွဲ့သဘောထက် အမှတ်တရပေါ့ 😛 နောက်တာပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ 🙂
Comment by လင်းလက်ကြယ်စင် December 5, 2008 @ 1:44 pm
သံဝေဂ လဲတော်တော်ရပါတယ် နောက်ဆိုလူတိုင်းကိုအရမ်းမယုံတာကောင်းမယ်နော်
Comment by PHYO December 5, 2008 @ 2:38 pm
လင်းလက်ရဲ သိက္ဓာ နဲ့ ရိုးသားမှု ကို ကျမ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်
Comment by Anonymous December 5, 2008 @ 3:09 pm
Anyway, you shouldn’t mention her name. Don’t let other person to affect your character.
You shouldn’t ask the blogger’s private matters in the comment. If you want to know, send her e-mail.
Comment by Anonymous December 5, 2008 @ 7:07 pm
ခင်မင်မှု နဲ့ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်တတ်သောသူ ရဲ့ ရှေ့မှာကြုံရမယ့် ဘ၀လမ်းက ပြေးကြည့်စရာမလိုပါ။
ခင်မင်မှုနဲ့ လဲ ပြီးရလိုက်တဲ့သင်္ခန်းစာကလဲ ဘ၀တလျှောက်လုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက် ညီမ မရှုံးပါ။
Comment by M.Y. December 5, 2008 @ 8:20 pm
ဒီလိုပါပဲ.. မဗေဒါလဲ ခံရပေါင်းမနဲဘူး.. မဗေဒါတုန်းကယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်း… သူ့ကြိုက်လို့ လိုက်လုပ်ပေးတယ်လို့တောင် ပြောခံလိုက်ရသေးတယ်..
Comment by မဗေဒါ December 6, 2008 @ 5:50 am
ညီမလင်းလက်…ဖတ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ၊ မင်္ဂလာနေ့ရက်ကာလမှာ ဆိုတော့ Stress တစ်ခုထပ်တိုးစရာ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေ…၊
Comment by ညီလင်းသစ် December 6, 2008 @ 11:36 pm
i agree it is bad, and understand your frustrations especially when u planned to use that dress for upcoming wedding.
Her actions being bad is her own fault, but defaming her would not be so nice fromamatured blogger. We should not blame her life out just for the brush of this specific incident. I do not know her, but asaperson, she hasalife to live too. blacklistingaperson inapublishing lik this is way too harsh.
i hope you would want to write the above topic likeastory without mentioning any specific persons. just my2cents of good will to support you. wish you have great time and congratulations for your wedding.. way to go.. 🙂
Comment by zy December 7, 2008 @ 1:28 am
another gift for you.. especially at this time that you should be happy..
just be like Pollyanna, and you will be making yourself happy too.. 🙂
Comment by zy December 7, 2008 @ 1:32 am
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မဘ၀မှာ ဒီလောက်မဆိုးပေမယ့် ဒုက္ခပေးခံခဲ့ရတာတွေ အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ငွေတန်ဖိုးထက် မေတ္တာ ၊ စေတနာ ၊ ခင်မင်မှုများစွာ ၊ ယုံကြည်မှု အစရှိတာတွေအားလုံး လေးလေးနက်နက် ပါဝင်နေတာမို့ သိပ်ကိုခံစားစိတ်ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။
အရပ်ထဲမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ သူခိုးဆိုရင် သူခိုးလို့ သတ်မှတ်ခံရတယ်။ မိန်းမပျက်ဆိုရင် မိန်းမပျက်လို့ သတ်မှတ်ခံရတယ်။ ဒါဟာ ဓမ္မတာပါပဲ။ မိမိရဲ့ ရှေ့ဆက်ဘ၀မှာ မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတစ်ခုကို ပြန်လည်ဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင် အလုပ်နဲ့ပဲ သက်သေပြရပါတယ်။ ကျွန်မက သူ့နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ သူ့ Biography ကြီး တင်ထားရင်တောင်မှ သူက မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ပြန်လည်ကြိုးစားတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အနာဂတ်လုပ်ရပ်တွေပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်မအပေါ် မမူတည်ပါဘူး။
သေချာတာတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်မ ဒေါသမထွက်တော့ပေမယ့် အင်မတန်မှသိပ်ချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မ မေတ္တာတွေကို စော်ကားခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ၊ တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ကာလမှာ ကိုယ်သိပ်ချစ်ခင်ကူညီပေးနေခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်က ဒီလိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ကျွန်မဘ၀ထဲမှာ ဒါကို ထုတ်ပစ်လိုက်ခဲ့ပါပြီ။ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ လှပနေတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လျှောက်လှမ်းနေရင်း ကျွန်မရဲ့စာဖတ်သူတွေ မျှော်လင့်သလောက် ဒီအဖြစ်အပျက်အပေါ် မေတ္တာသိပ်များများ ကျွန်မ မထားနိုင်သေးတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဆုမွန်ကောင်းများအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် 🙂
Comment by လင်းလက်ကြယ်စင် December 7, 2008 @ 2:48 am
မမ အခုမှ လာဖြစ်တော့တယ်..
Comment by Anonymous December 7, 2008 @ 6:28 am
အင်း….. ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာ။အဲဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေကပြောတာ
ကိုယ်ကကြူးကိုယ့်ဒူးတောင် မရုံနဲ့တဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ
Comment by အိမ် December 7, 2008 @ 1:04 pm
Let me say as my own sister. I dun think this is not yr friend’s fault . This is only your fault because you didnt obey yr parents suggestion. Even you know her ture color, you allow her to stay together at your home. So you should deserve that kind of payment.
Comment by Anonymous December 15, 2008 @ 8:41 pm
Comment by Anonymous December 15, 2008 @ 8:42 pm
Haveabeautiful life with your Mr. Right.
We all want to see u r so happy with your man but we are waiting for your new posts, too. (Am I selfish?) 🙂
Comment by wai December 16, 2008 @ 7:27 am
very bad story,that shows u need to study more about people.
I though she had no choice and did it.
Comment by Min January 24, 2009 @ 5:00 am
Comment by Anonymous February 14, 2009 @ 12:43 pm